सामाजिक मिडिया इक्विटी र लगानीमा फिर्ता | Martech Zone
सामाजिक मिडिया इक्विटी र लगानीमा फिर्ता
बिहीबार, जुन 2, 2011 बिहीबार, अक्टुबर 27, 2011 Douglas Karr
गैरी Vaynerchuck द्रुत रूपमा एक सामाजिक मिडिया प्रचारक बन्न गइरहेको छ जुन म सुन्न, पछ्याउन, र सहमत हुन सधैँ रोक्छु। ब्रायन इलियट भर्खरै दुई भाग श्रृंखलामा ग्यारीको अन्तर्वार्ता लिनुहोस् जुन म हरेक व्यवसाय-मालिकलाई प्रोत्साहन गर्दछु ... सानोदेखि सीईओसम्म ... सुन्नको लागि।
अन्तर्वार्ताको एक बुँदाले मलाई चोट पुर्‍यायो - र मलाई थाहा छैन कि साक्षात्कारमा यसमा पर्याप्त जोड थियो। ग्यारीले लगाउने कम्पनीहरूको बारेमा कुरा गर्यो सामाजिक मिडिया मा इक्विटी। मार्केटरहरू र कम्पनीहरूले प्राय: द्रुत हिटको खोजी गरिरहेका छन्, अभियान मार्केटिंग लगानीमा ठूलो प्रतिफलको साथ। म विश्वास गर्दछ कि व्यवसायहरु लाई वास्तव मा सामाजिक मिडिया को बारे मा बिभिन्न तरिकाले सोच्न आवश्यक छ।
मैले सँधै भनेको छु कि ब्लगिaम्याराथन हो, स्प्रिन्ट होईन। मसँग अहिले ग्राहकहरू छन् जो निराश छन् किनभने धेरै महिना पछि उनीहरूले ठूलो फिर्ती देखिरहेका छैनन् जुन केही उद्योगमा घोषित भइरहेको छ। उनीहरूले वृद्धि र गति देखिरहेका छन्, यद्यपि ... र यो हामी उनीहरूको ध्यान केन्द्रित गर्दछौं।
यो तपाईको सेवानिवृत्ति खातामा पैसा राख्नु जस्तै हो र केहि बर्षमा अवकाश लिनु हो। यो हुन सक्छ? मलाई लाग्दछ कि तपाईले एउटा स्टकमा हिर्काउन सक्नुहुनेछ जुन विस्फोट हुन्छ .. तर सम्भावना के हो ?! तथ्य यो छ हरेक ट्वीट, प्रत्येक ब्लग पोष्ट, प्रत्येक फेसबुक प्रतिक्रिया ... र पछिको निम्न तपाईले पाउनु हुन्छ ... तपाईको व्यवसायको भविष्यमा एउटा सानो लगानी हो।। तत्काल फिक्सको लागि हेर्दै बाहिरिनुहोस्।
तपाईंको रिटायरमेन्ट खाता जस्तै, प्रवृत्ति हेर्नुहोस् र निश्चित गर्नुहोस् कि यो सही दिशामा जाँदै छ। के तपाईं निम्न बढ्दै हुनुहुन्छ? के तपाईं बढि व्यक्तिहरूमा पुग्दै हुनुहुन्छ? के तपाई अधिक उल्लेख, मनपर्दो र रिट्वीट पाउनुहुन्छ? यी सबै निकेलहरू, पेनीहरू र डाइम्स तपाईंको सोशल मिडिया इक्विटी खातामा जम्मा हुँदै छन्।
मैले व्यक्तिगत रूपमा एक दशक पहिले सामाजिक मिडियाको साथ शुरू गरेको छु र साप्ताहिक लगानी गर्दैछु, यदि दैनिक छैन भने। केहि मान्छेहरु छिटो मेरो व्यापारको छिटो, Highbridge, बढेको छ। हामीले हाम्रो अफिसलाई एक बर्ष भन्दा अलि बढी खोलेका छौं र १-महिनाको लागि पूर्ण-समय भएको छ। हामीसँग full पूर्ण-समय कर्मचारीहरू र एक दर्जन पूर्ण-समय साझेदार कम्पनीहरू छन् जुन हामी दैनिक काम गरिरहेका छौं। हामीसँग न्यूजील्याण्डका ग्राहकहरू छन्, सम्पूर्ण यूरोप र उत्तर अमेरिकाभर।
मैले यो कम्पनी एक वा दुई बर्षमा निर्माण गरेको छैन। मैले पछिल्लो दशकमा कम्पनी निर्माण गरें, र त्यो भन्दा अघिको दशकमा विशेषज्ञता निर्माण गर्‍यो। म र मेरो अनलाइन समुदायमा लगानीको बीस वर्ष पहिले मैले कहिले मेरो व्यवसायको ढोका खोले! यसको लागि गति, धैर्य, नम्रता ... र सफल हुनको लागि नन-स्टप दबाव चाहिन्छ।
यदि तपाईंको कम्पनीले छिट्टै लगानी गर्न थाल्छ भने, पछि भन्दा तपाईंको कम्पनी बलियो र ग्राहकहरू र प्रशंसकहरूको विश्वासी समुदायको हुने सम्भावनाहरू ठूलो छन्। आज सोशल मिडियामा इक्विटी राख्न सुरु गर्नुहोस् र तपाईंले छुटाउनु हुने छैन। ग्यारीले भनेका छन कि आधुनिक मिडियामा हुने हरेक संक्रमण - पत्रपत्रिकाहरू, म्यागजिनहरू, रेडियो र टेलिभिजनमा, अनुकूलन गर्न नसक्ने कम्पनीहरूलाई गाडिएको छ। यदि तपाईंको कम्पनीले लगानी नगर्ने निर्णय गर्छ भने त्यो ठीक छ। तपाईंको प्रतिस्पर्धी हुनेछ।
जोखिम धेरै ढिलो भइरहेको छ। Retire 65 मा सेवानिवृत्त गर्न को लागी कोशिश जब तपाईं when० मा बचत शुरू गर्दछ काम गर्दैन। न त सामाजिक मिडिया मा लगानी गर्नेछ। कम्पनीहरूले मौलिक रूपमा सामाजिक मिडियामा हेर्ने तरिका परिवर्तन गर्न आवश्यक छ, खोज (सामाजिक द्वारा प्रभावित) र अनलाइन मार्केटिंग यदि उनीहरू बाँच्नको लागि घरमा छन् भने। भोलि। यो लहर होइन।
प्रासंगिक आगन्तुकहरूको साथ तपाईंको ब्लगको यातायात ट्रिपल
जुन 8, 2011 बिहान 11:22 बजे
विगत केही सातादेखि मैले महसुस गरेको यस्तै हो । यसमा तपाईंको परिप्रेक्ष्य हेर्न पाउँदा र सामाजिक सञ्जाल प्रयासहरूले 'अब प्रतिक्रिया' प्रकारको वातावरणमा पनि समय लिन्छ भनी बुझ्दा ताजा हुन्छ!
मैले वास्तवमा यो पढ्नु अघि मेरो चिन्ताको बारेमा ब्लग गरें! मैले तपाइँको पोष्ट पढे पछि यसलाई पुन: पढें र मैले लेखेको देखेँ - "मलाई लाग्छ कि सामाजिक मिडिया प्रयासहरू निर्देशित गर्ने सबैभन्दा कठिन भाग भनेको तत्काल प्रतिक्रियाको संसारमा तत्काल परिणामहरू चाहनु हो!" (http://bit.ly/l5Enda).
पोस्ट डगलस को लागी धन्यवाद! यो धेरै सराहनीय छ!
अगस्ट 1, 2012 बेलुका 7:58 बजे
तपाईं ठिक हुनुहुन्छ! केही व्यवसायहरूले सामाजिक सञ्जाललाई फरक रूपमा बुझेका छन्। हो, तपाईंले रोपेको कुरा कटनी गर्न धेरै प्रयास र समय लाग्छ।